ကိုယ် ကြုံခဲ့ရတဲ့ NTU Undergrad EEE – Dr Myo Thida
NTU မှာ ကိုယ်တတ်တဲ့နှစ်က စနစ်သစ်ကို ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် common engineering ကို နှစ်နှစ်တိတိ တက်ခဲ့ရပါတယ်..အကျိုးဆက်ကတော့ Third year/ Fourth year မှာ စာပိတဲ့ ဒဏ်ကို အလူးအလှိမ့်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခု နောက်ပိုင်းတော့ common engineering ကို တစ်နှစ်ပဲထားတဲ့စနစ်ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်. .
နောက် အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံတကာမှာ သုံးတဲ့ GPA (Grade Point Average) စနစ်ကိုတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စတင်အသုံးပြုပါတယ်.. ဒီစနစ်ကို ယေဘူယျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘာသာတစ်ခုမှာ ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+,D နဲ့ F တို့ကို ရနိုင်ပါတယ်.. A+ နဲ့ A အတွက် GPA အမှတ်က (၅) ဖြစ်ပြီး A- အတွက် ကတော့ ၄.၅ မှတ်၊ နောက် B+ ကနေ D ကတော့ အမှတ်ဝက်ဆီ နှုတ်သွားရမယ်..ဆိုလိုတာက B+ သည် ၄ ဖြစ်ပြီး D ကတော့ ၁ မှတ်ဖြစ်ပါတယ်.F ကတော့ ကျတဲ့ သဘောပါ။ GPA သုညပဲ ရပါတယ်..
CGPA (Cumulative GPA) ဆိုတာကတော့ ကျောင်းသားရဲ့ GPA အမှတ်အားလုံးနဲ့ AU(Academic Unit) ကို မြှောက်ပြီး Academic Unit နဲ့ ပြန်စားတာပါ.. ပြောရရင်တော့ ပျမ်းမျှ တွက်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ အဲ AU ဆိုတာက ဘာသာရပ် အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ၂ (သို့) ၃ (သို့) ၄ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. အကြမ်းပြောရရင်တော့ AU များတဲ့ဘာသာက အရေးကြီးတဲ့ ဘာသာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်.. ဥပမာ ပေးရရင်.. မောင်ကကြီး က ပထမနှစ်မှာ ၅ ဘာသာ သင်ရတယ်ဆိုပါတော့။ ၂ ဘာသာအတွက် AU က ၃ မှတ်ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ဘာသာက ၂ မှတ်ဆိုပါတော့။ သူစာမေးပွဲ ရမှတ်က A,A,B+,B,C ဆိုကြပါစို့။ AU ၃ မှတ်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာတွေမှာ သူက A ရတယ် ထားပါတော့။ ဒါဆိုရင် ဒီနှစ်အတွက် သူ့ရဲ့ Year GPA ကို ဒီလို တွက်ရပါမယ်..
Year GPA = (3*(A= 5) + 3* (A = 5) + 2*(B+ = 4) + 2*(B = 3.5) + 2* (C = 2) )/(2*3 + 3*2)
ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ဒီနှစ်အတွက် Year GPA = 49/12 = 4.08 ရပါတယ်.. သူက ပထမနှစ် ကျောင်းသားဆိုရင် ဒီအမှတ်ဟာ သူ့ရဲ့ CGPA လဲဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်လို့ အတန်းကြီး သွားပြီဆိုရင်တော့ ဖြေပြီးခဲ့သမျှ ယူခဲ့ပြီး သမျှ ဘာသာအားလုံးကို ထည့်တွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီစနစ်က ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်း သိသာစေတဲ့ စနစ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရ ဒီစနစ်ကို ပိုသဘောကျပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုက ပထမနှစ်.. ဒုတိယနှစ်မှာ စာမေးပွဲ တစ်ဘာသာလောက် ကျသွားခဲ့ရင် CGPA (Cumulative GPA) ကို ပြန်ဆွဲတင်ရတာ တော်တော် လေး ခက်ပါတယ်.
အဲတော့ ဇွဲနဲ့ . နေ့ စဉ်ပုံမှန် ကြိုးစားနေသူနဲ့ကောက်ရိုးမီးလို ၀ုန်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ ကြိုးစားသူက စာမေးပွဲမှာ သိသိသာသာ ကွာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။